Vavaky ny matotra amin'ny finoana
"1 Jehovah ô, akory izato hamaroan’ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy. 2 Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin’Andriamanitra izy. 3 Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako. 4 Amin’ny feoko no iantsoako an’i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy. 5 Izaho nandry ka natory; Nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy. 6 Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy. 7 Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin’ny ratsy fanahy novakivakinao. 8 An’i Jehovah ny famonjena; Ho amin’ny olonao anie ny fitahianao." Salamo 3:1-8
Miantoraka amin’Andriamanitra (1-2). Raha isika re no teo amin’ny toeran’i Davida inona no nataontsika? Tsy mora izany hoe zanaka nateraka, Absaloma, no manenjika, vonon-kamono, nanongana ny tena eo amin’ny fitondrana. Davida? Niantoraka tamin’Andriamanitra! Mamboraka mazava, tsy miholikolika ny zava-manjo azy sy ny fahoriana mafy lalovany: “…akory izato hamaroan’ny mpampahory ahy” (1). Tena mahatsiaro fa malemy, tsy mahefa na inona na inona eo anatrehan’ireo mpanohatra azy. Tsy vitan’izany fa voeson’ireo fahavalony fa tsy afaka hamonjy azy Andriamanitra: “…tsy manam-pamonjena amin’Andriamanitra” (2). Ao amin’ny ady mafy izay lalovana miantoraha amin’Andriamanitra! “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho” (Salamo 50:15a).
Matoky ny Tompo (3-6). “Kanjo”: teny maneho fialàna amin’ny fahakiviana fa mibanjina kosa an’Andriamanitra izay afaka hamonjy azy. Tsy mifantoka intsony amin’ny haben’ny olana sy ny hamaroany fa Andriamanitra no hitokiany: “ampinga manodidina ahy”, “voninahitro”, “mpanandratra ny lohako”, “mpamaly ahy”, “mpanohana ahy”, “mpampahery”. Nahazo toky tanteraka tamin’Andriamanitra izy, afaka ny tebitebiny satria fantany fa Andriamanitra miaro azy sy manome fiadanana ho azy.
Fanontaniana: Mbola afaka miaina ao anatin’ny fiadanam-po sy fahatoniana ve isika izao, manoloana ireo ahiahy sy tebiteby maro? Vakio Filipianina 4:6-7.
Mangataka an’Andriamanitra hiasa (7-8). Mampiditra an-tsehatra an’Andriamanitra i Davida: “Mitsangàna Jehovah ô”. Mametraka ny famalian’ny fahavalony Aminy. “…Ahy ny famaliana; Izaho no no hamaly hoy Jehovah” (Rômanina 12:19b), ary ny vokatr’izany amin’ny fahavalo dia: “namely ny takolako ny fahavaloko rehetra Ianao, ny nifiny ny ratsy fanahy novakivakianao” (7b). Tahaka an’i Davida, mahatsiarova ny famonjen’Andriamanitra anao tamin’ny olana nolalovanao.